OPDOn Subboonummaa Oromoo Ajjeessuu fi Ajeessuuf Wixxifachaa Jirti! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOPDOn Subboonummaa Oromoo Ajjeessuu fi Ajeessuuf Wixxifachaa Jirti!
OPDOn Subboonummaa Oromoo Ajjeessuu fi Ajeessuuf ixxifachaa Jirti!
Damee Boruu tiin, Caamsaa 4, 2019
OPDO was created in the later stages of the civil war by captured troops of the then Ethiopia leader Mengistu Hailemariam to serve as a satellite organization for the upcoming TPLF rule. Their genesis was mainly in a response to the growing influence of the Oromo rebel group, OLF. In 2018, the Oromo youth known as Qeerroo, forced the OPDO to partially detached itself from TPLF. Now, OPDO’s high priority, is to look for a new master, because OPDO specializes only in being servant or underdog. A single candidate for this high position is the former Mengistu regime advisers’ team, i.e. the Amhara elites. This team has good experience in leading a regime into a ditch, eg. Derg.
Qondaallonni OPDO har’a aangoo Impaayeera Itoophiyaa fudhannee jira jedhan kun ijaaramuu irraa kaasee umurii isaanii guutuu warra akeeka farra Oromummaa qabatee guddate. Xiyyeefanaa fi siyaasaan itti guddatan Impaayeera Itoophiyaa jiraachisuuf sabboonummaan Oromoo dhabamuu akka qabu qajeelfama TPLFiin qaramanii guddatan. Har’a illee tooftaa dulloomaa sana qabatanii akka wixxifatan kan isaan godhu yaaddoo wajjin guddatan sana(indoctrination) irraa akka maddu gaaffii hin qabu. Sabboonummaa Uummata Oromoo sadarkaa amma jiru kana irraa cabsanii dhabamsiisuun waan yaadamu qabu miti. Karaa biraa bacancarsanii rooroo fi gadadoo Uummata Oromoo irratti dheeressuun hin danda’ama taha. Gochi kun Impayeera Itoophiyaa caccabaa jiruuf furmaata hin tahu. Utuu gareen OPDO kun warra beekumsaa, dandeettii fi dammaqinsa guddaa warra qabu tahanii sabboonummaa Oromoo kana qabatanii Oromiyaa ititte(stability) ijaarudhaan warra hafe ittiin harksuu danda’u.
Bakka sabbonummaan Oromoo sadarkaa ol’aanaa gahee jiru komandi postii jala galchuudhaan waraana kumaatama dhibaan itti bobaafattee uummata keenya irratti hammeenya Wayyaane dalagtee ol raawwachaa jirti. Naannoo waraanni jiru kanatti ilmaan Oromoo hidhuun, ajjeessuun waxxaluun, saamuu fi dubartii Oromoo waloon gudeeduun hojii RIB isa duraa tahee jira. Waan midiyaa jalaa dhokatee jiruuf hammeenyi Uummata Oromoo Wallagaa, Boranaa fi Gujii irra gahaa jiru uummata biyya lafaa mitii Uummatni Oromoo naannoo biraa jiru iyyuu bareechee quba hin qabu. Kanaafuu uummatni Oromoo dirmachuuf dhiisee ciisee ilaala jira. Yoo subboonummaa Oromoo hin ajjeefne OPDOn tokko tokkoo mana Oromoo gubuu of duuba hin deebtu.
OPDOn maqaa ODPn sochoo’uuf of qopheessaa jirtu kun tarkaanfiin ishee inni duraa of keessa warra sabboonummaa Oromoo qaban baasuu dha. Haala kana yaroo darbes kaaseen jira. Obbo Lammaa Magarsaa Suusii Itoophiyaan qaba haa jedhu malee nama guyyaa tokko sabboonummaa Oromoo irratti waakkatee hin beekne. Addee Xayibaa Husseen fi Obbo Lammaa Magrsaa MNO keessaa baasuun OPDOn nama Oromoo irratti hojjetu malee Oromoof hojjetu akka hin qabne raga dha. Warri aangoo OPDO dhuunfate diqaaloota Habashaa akka tahan ifa jira. Hojii isaanii inni duraa sabboonummaa Oromoo irratti dula ifaa fi lafa jalaa banuu dha.
Inni ifaa kunoo akka RIB bobaasuun Ummata Oromoo nagaa homaa tokko isaan goonee Wallaga, Boornaa fi Gujii keessati fixuuf waraana tooftaa duraa godhatanii deemuu dha. Inni lafa jalaa maqaa nageenya naannoo fi Impaayeera Itoopiyaa eeguu fi ijaaruu jedhuun OroMara, OroSomalee, OroGambeela,OroGumuz OroAFar, OroTigray, OroMarree(Nama hunduma) jechuun waan hiikaa fi bifa hin qabne oofuun uummata Oromoo burjaajessuu dha. Ummata Ormoo meeshaa xaphaa (joker) gootee ayyaana ittiin ilaalachaa jirti. Uummatni Oromoo nagaanii fi wal kabajuun uummata olla isaa wajjin jiraachuun barbaachisaa tahuu irra darbee dirqama. Garuu akka Impaayerri Itoophiyaa hin cacabneef jecha Uummatni Oromoo bara baraan garboomee haa jiraatuun cubuu dha. Waan hundaa dura uummatni Ormoo haqa hiree isaa ofiin murteefachuu gonfachuu qaba. Sana booda abbaa barbaadee fi walii gale wajjin nagaan biyya ijaaratee jiraachuun mirga isaa ti.
Waan OPDOn TPLF irraa barate yoo jiraate ilmaan Oromoo gurmuun hidhuun, ajjeessuun fi qaama irra hir’isuun sabboonummaa Oromoo kan jabeessu malee kan laafisu akka hin taane dha. Kanaafu tooftaan OPDO bakka waraanni jiru irraa kan hafe irra guddaan isaa tooftaa sabboonummaa Oromoo burjaajjessuu, dogongorsuu fi bacancarsuu irratti kan xiyyeefatame. Gargaarsa ol’aanaa fi tumsa guddaa Mootummaa Naannoo Amharaa fi ofutultoa Habashaa biraa argachaa jirti. Iskindir Nagaa illee kana booda waan Kononeel Abiyi barbaadu hojjechuun qaba jechaa jira. Finfinnee yoo tahe OPDOn warra Habashaaf laattee jirti. Inni immoo maaliif Uummata Oromoo Mootummaa isaaniif hojjetu irratti kaasuun barbaachisaa taha? Finfinnee keessatti MNA wal gahii hatattamaa godhata. OPDOn garuu Amboo fi Adaamaa irra deemtee wal gahii gugguddaa godhachuu qabdi. Hundhura Oromiyaa diina laachuu caalaa OPDOn gantuu tahuu isheef ragaan kana caalu in jiru. Kana malee OPDOn azmaarii of faarsisuudhaan Uummata Oromoo biratti jaallatamuuf tattaafachuun xiqqummaa ishee caalaa saaxila baasa.
Impaayeera Itoophiyaa kan itti ejjetee diigaa jiru Sabboonummaa Oromoo utuu hin taane Liyuu Poolisii Amhaaraa akka tahe hubatamuu qaba. Impaayerri Itoophiyaa michuu OPDO kan tahe Liyyuu Poolisii Amhaaran akka diigamaa jiru OPDOn iyyuu waan hubate natti hin fakkaatu. Liyuu Poolisiin Amhaaraa kun duraan dursee Walqayitii fi Raayaa deefachuu TPLF xuxxuqquu jalqabee ture. TPLF akka kaansa yaroo iditu ofirra galagalee uummati Qiimanti fixe. Lubbuu heddutu darbe. Qabeenya guddatu barbada’e. Hulaa midiyaa (media outlet) dhibaan kan of harka qabu warra Amhaaraa waan tahaniif darbanii Uummatni Qimaanti nu rukkutee jedhanii iyyachaa turan. Achii deebi’anii Oromoo Karrayyuu irratti lola banan. Uummatni Oromoo wal gargaaree of irra ittise. Qophii guddaa godhanii Oromoo Waloo fi Shawaa Kaaba irratti boban. “Oromoo Waloo biyyi keessan Wallaga asii deemaa” jedhan jedhu. Yaroo Uummatni adda dha’ee of irraa deebisuu waraanni ABO (WBO) nu rukkutee jedhanii yaroo iyyan midiyaan isaanii WBO Amhaara fixe jedhanii Mootummaa OPDO irraa gargaarsa gaafachaa turan. Jecha isaanii kana RIB waan harkaatti dideef malee isaan dhugaa fakkeessan akka OPDOn Oromoo Waloo rukkuttu gochuuf ture. Torbaan darbe kana keessa garaa jabeenya guddaan daa’imaa fi dubartii Gumuz of fixanii ittiin fakkaraa jiru. Lola kaasanii yaroo rakkatan RIB waamtatu. Mootummaan OPDO Liyuu Poolisii Amhaaraaf dirmatee lubbuu oolshuu irraa dhaabbachuu qabdi.
Humni ijaaramee hidhatee nageenya biyya Sanaa booresaa fi diiguuf qophaa utuu jiruu OPDOn subboonummaa Orommoo ajeesuu fi ajjeesuun Impaayeera Itoophiyaa nan ijaara jechuun abjuu dha. Biyya Sabni tokko ana malee namni biraa biyya kana keessatti hiree qabaachuu hin qabu jedhu keessatti sabboonnummaa saba tokko molquun hiikaa hin qabu. Oftuulummaa fi Sabboonummaan Amhaaraa baaxii yaroo rukkutee jiru kana subboonummaa Oromoo bacancarsuun eenyuunuu hin gargaaru. Garuu Uummata Oromoo dhumaatii dhaga’amee hin beekneef akka saaxiluu hubatamuu qaba. Haala kana fakkaatu keessatti uummatni Oromoo humna qinda’een of ijaaree diina karaa kaamiin iyyuu itti dhufuu of irraa ittisuuf qophaa’aa tahuu qaba. Kana malee ofii badne Impaayeera Itoophiyaa tiksuuf dirqama hin qabnu. Impaayeerri Itoophiyaa Uummata Oromoo mana hidhaa fi mana salphinaa ti. Balbala bilisummaa fi walabummaa OPDOn irratti cuftee mana hidhaa kana keessatti yoo dhume kan itti gaabuu fi gaafatamu Saba Oromoo taha.
የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? ክፍል ሶስት